192.168.8.1 - Dib-u-deji router-kaaga Dejin Dejin ah
Waxaa laga yaabaa inaad rabto Dib u deji router-kaaga ilaa Default Settings haddii aadan xusuusan karin lambarka sirta ah, ma awoodid inaad xasuusato badhanka amniga shabakadda wireless, ama waxaad dhib ku qabtaa welwelka isku xirnaanta.
Habka hoos ku xusan ma aha sida dib u bilaabista modem ama router.
Farsamooyinka Dib-u-dejinta Router ee kala duwan - Muuqaal adag, Jilicsan, Baaskiil wadista Awooda
Siyaabaha ugufiican ee Dib loogudajiyo Router
Siyaabo badan oo dib u dejin router oo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa waxay kuxirantahay duruufta. Sida caadiga ah lagu taliyo waa resets adag, resets jilicsan iyo baaskiil awood.
Sida dib loogu celiyo Router-kaaga Dejinta Xalka
Dib-u-dejin adag ayaa ah nooca ugu daran ee dib-u-dejinta router & sida caadiga ah loo isticmaalo halka maamulku uu ku guuldareystay inuu dib u soo celiyo furayaasha ama lambarka sirta ah & inuu doonayo inuu mar kale ku bilaabo goobaha cusub.
Dib u dejinta adag dib ugama laabaneyso ama kama saareyso nooca firmware router-ka hadda lagu rakibay. Si looga hortago dhibaatooyinka isku-xirnaanta internetka, kala sooc qalabka 'router' ka router ka hor intaadan sameyn dib u dejin adag.
Si aad u sameyso dib u dejin adag:
U wareeji router-ka, u jeedi dhinaca leh furaha Dib-u-dejinta. Furaha Dib-u-dejinta waxay ku taal dhinaca hoose ama xagga dambe.
Xoogaa daqiiqad ah & fiiqan, sida caday oo kale, waxay haysay furaha Dib-u-dejinta soddon ilbiriqsi.
Xoree furaha Dib-u-dejinta & sug soddon ilbiriqsi oo router-ku uu dib ugu dejinayo si buuxda oo awood leh mar kale.
Dariiqa beddelka ah ayaa ah dib u dejinta adag ee 30-30-30 tilmaamaha oo ku lug leh riixida furaha Dib u habeynta ee sagaashan sekan halkii soddon laga dhigi lahaa & waa la isku dayi karaa haddii kan ugu weyn 30-seyniska uusan shaqeynin.
Dhowr abuurayaal router ah ayaa lahaan kara hab ku habboon oo dib loogu dejiyo router-ka, iyo farsamooyin kale oo dib-u-dejiye router ayaa laga yaabaa inay ku kala duwanaan doonaan moodooyinka.
Demi & shido awoodda router-ka waxaa looyaqaanaa baaskiil awood. Waxaa loo isticmaalaa in laga soo kabto dhibaatooyinka taas oo u keenta router inuu hoos u dhigo isku xirnaanta tusaale ahaan waxyeelada xasuusta gudaha ama kuleylka. Wareegyada awooddu kama saaraan furayaasha sirta ah ee la keydiyey, goobaha kale ee la keydiyey ama furayaasha amniga, oo ay ku jiraan muraayada router.
Si aad awood ugu yeelatid router:
Demi awoodda router-ka. Sidoo kale dami badhanka Power ama ka saar fiilada korontada.
Batteriga ka saar router-yada ku shaqeeya batteriga.
Shakhsiyaad badan ayaa sugaya soddon ilbiriqsi oo aan ku shaqeynin; weli looma baahna in la sugo wax ka yar ilbiriqsiyo inta u dhexeysa goynta iyo dib u soo xiridda fiilada korantada. Laakiin resets adag, in dib loo bilaabo hawlgalka router wuxuu qaadanayaa waqti marka awoodda la soo celiyo.
Iyadoo la xallinayo cilladaha isku xirnaanta internetka, waxaa laga yaabaa inay gacan ka geysato dib u soo celinta xiriirka ka dhexeeya modemka & router. Tani waxay ku jiri kartaa oo keliya inay ka go'do xiriirka jireed labada dhexdooda, ma xakamayso softiweerka ama joojinta awoodda.
Marka la barbardhigo noocyo badan oo resets ah, resets jilicsan ayaa si dhaqso leh u dhaqan galaya maadaama aysan u baahnayn router inuu dib u bilaabo.
Si aad u sameyso dib-u-dejin jilicsan, ka fur xarigga ku xiraya router-ka modemka, ka dibna dib-u-wada-jir muddo ka dib. In yar oo router ah ayaa yeelan kara hab aan caadi aheyn oo lagu sameeyo dib u dejin jilicsan:
Ka raadi fure furitaanka / Isku xidhka dashboardka. Tani waxay dib u dejineysaa xiriirka ka dhexeeya adeeg bixiyaha & modemka.